OMG ! एउटै स्कूलका ७ जना शिक्षिका एकैपटक गर्भवती - Everest Dainik - News from Nepal
OMG ! एउटै स्कूलका ७ जना शिक्षिका एकैपटक गर्भवती
काठमाडौ, जुम्ल्याहा या तिम्ल्याहा बच्चा पाउने कुरा त स्वभाविक नै लाग्छ । तर एउटै स्थानमा काम गर्ने महिलाहरु एकैपटक गर्भवती भएको समाचार सुनियो भने पत्याउनुहुन्छ त ?
असम्भव जस्तै लाग्छ हैन ? तर यो साँचो खबर हो । अचम्म त के छ भने यी सात जना महिलाले ८ जना बच्चा जन्माउने समाचार प्रकाशित भएको छ ।
घटना अमेरिकाका हो । अमेरिकाको कन्सासमा स्थित ओक स्ट्रिट प्राथमिक विद्यालयमा यो अनौठो घटना देखिएको हो । यो स्कूलका सात जना शिक्षिका गर्भवती भएका छन् । स्कूलका प्रिन्सिपल एश्ले मिलरका अनुसार यसअघि गत अक्टुबरमा दुई जना शिक्षिकाले बच्चा जन्माएकी थिइन । अहिले भने सातै जना गर्भवती भएको समाचारले उनी अचम्ममा परेकी छिन् ।
यी मध्ये एकजना महिलाको पेटमा भने जुम्ल्याहा सन्तान रहेको बताइन्छ ।
उक्त स्कूलमा १४ जना शिक्षिका रहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा स्कूल नै खाली हुने अवस्था देखिएपछि नयाँ शिक्षिका बोलाइने प्रिन्सिपलले बताए ।